Igcine ukubuyekezwa: uJan. 06 2018 | 3 imiz ufunde
Ngaphambi kwezinsuku zika ID yomshayeli, imiyalezo futhi media social ezisongela ungase Ukudayela ngokuphepha a sika guy (noma wentombazane) Inombolo ngokuphindaphindiwe kuze iminwe yakho aba ndikindiki kusukela ngokucindezela izinkinobho. With the izimangaliso zanamuhla of technology ememezela konke okwenzayo, ebona igama lakho kanye nenombolo pop up on esitokisini sakhe ezine, kahlanu noma ngaphezulu ngosuku a turn inani off. Kungokufanayo uya ematheksthi, imeyili kanye nemiyalezo media social. Akukona Kungenzeka ukuthiJohnDoe ufuna ukufunda memeza yakho out Tweets kuye ihora njalo ngehora noma uthole umbhalo ngemuva umbhalo sizibuza lapho ukhona nokuthi wenzani. Lokhu kungafana kwezobuchwepheshe ekumlandeleni azungeze, NEKUKHULUMA njalo phezu kwehlombe lakhe.
Uma overdependence yakho kwi umlingani wakho siphuma njengenhlangano overdependence on ubuchwepheshe, usike bambelela badlulele umsebenzi akuhileli imiyalezo, tweeting, imiyalezo noma ngenye Cyber ​​ukumlandela.
Hit the gym. Njengoba uhlevane okweqanda wena up and down, ikhono lakho ukudayela noma umbhalo ngizoya kusukela emithaleni to inobudlabha. Ngaphandle uhlela on imiyalezo into ephuma like, "Hu t w? Wgats up "wena cishe ngeke unamathele kuye futhi azame ukuxhumana ngesikhathi Amazing yakho. Njengoba i bonus wanezela obonisa angakusiza ukuba uphumule futhi de-ukucindezeleka, okwenza isidingo sokuba oswele hamba ekwehleni. Uma ungenalo ubulungu gym, ungagijimi phandle uthole omunye nje ubalekele ukuziphatha kwakho siqu oswele. Thatha inja yakho sishaywe, hamba for a Jog nxazonke yangakini noma hit ezindledlaneni bike at park wangakini. Into eyinhloko okufanele siyikhumbule: Shiya cell yakho ekhaya noma gym yakho eydijithali. Uma ungenalo it, awukwazi ukuyisebenzisa.
Shayela omunye. Yisho omunye wabangane bakho ivesti njengoba caller designated. Uma ungumuntu mayelana ukwenza ucingo lwesibili noma umbhalo wesithathu, usengakwazi ayothatha ifoni yakho - njengoba nje umuntu omunye ukuphela guy yakho noma intombazane. Ake umngane wakho ukukhuluma nawe phansi, ukukhumbuze ukuthi baningi abantu ekuphileni kwakho ukuze uhlale inkampani.
Ingabe ohlangeni not Cyber. Uma ziyenzeka upheqa ikhasi yakhe Facebook ezimbalwa izikhathi eziningi kakhulu, cishe ngeke azi ngaphandle wenze kucace. Uma ngempela amethembe, akukho sizathu ukuhlola up kuye 20 izikhathi ngosuku. Phela, mhlawumbe smart kakhulu post pics of ngokwakhe futhi enye intombazane lapho uyazi ukuthi ungase ubone it. Uma akayena ukuthi smart, kungani wena naye vele? Uma ziyenzeka ukubamba eyodwa amazwibela eziningi kakhulu kwekhasi sakhe emphakathini media, musa njalo post comments. He, nabangane bakhe, akudingeki ukuba bazi ukuthi wena uku ekhasini lakhe njalo ngemva kwemizuzu emihlanu.
Qhubekani a sesabatha esasinikezwe cell. Uma ubhekene seziqala ukuvumela ungangena bambelela up kuwe, abeke cell yakho ukuze baphumule usuku. Nakuba lokhu kubonakala like an engenakwenzeka, lwesintu qhubeka eside ngaphambi Pop abake baba khona. Vula ifoni yakho off, wasibeka ekhabetheni futhi enze izinhlelo nabangani kanye nomndeni for an usuku lonke.
Hit the town. Hlela ubusuku nabangane. Nakuba uku lokudlela umatasa, dancing noma ukubukela Flick yakamuva blockbuster, ngeke ukudayela uthando lwakho noma ikhuluma naye laqonda. Uma wenze uzithola NEKUKHULUMA ifoni yakho, ngilangazelela ukufika ku umbhalo esheshayo ngenkathi abangane bakho athungatha omunye indlela, ziphonse emuva zingene samanje.